Best urolithin ntụ ntụ - Nrụpụta ihe nrụpụta
Cofftek nwere ikike imepụta na inye urolithin a, urolithin b na Methylurolithin A n'okpuru ọnọdụ cGMP.
Urolithin B ntụ ntụ
Urolithin A ntụ ntụ
Kedu ihe bụ Urolithins?
Urolithins bụ ihe mepụtara ma ọ bụ metabolites nke ihe ellagic acid dị ka ellagitannins. Ihe mejupụtara kemịkal ndị a bụ metabolized site na ellagic acid-derivatives site na microbiota eriri afọ.
Ebe ọ bụ na ahịhịa eriri afọ dị mkpa maka imepụta urolithins, ọnụ ọgụgụ urolithins na -emepụta n'ahụ na -adabere n'ụdị ihe ọkụkụ dị na ahịhịa, ihe kacha mkpa bụ nke otu Clostridium leptum. A na -akọ na ndị nwere microbiota bara ọgaranya n'ime ndị otu a na -emepụta ọnụ ọgụgụ urolithins dị elu karịa nke nwere ahịhịa ahịhịa ndị ọzọ dịka Bacteroides ma ọ bụ Prevotella.
A na -emepụta urolithins site na punicalagin na eriri afọ, dị ka ellagitannins, wee wepụta ya na mmamịrị. Iji lelee mmepụta urolithin n'ime ahụ, ọ dị mkpa ka enyocha ọkwa ha n'ime mmamịrị nke onye riri nri bara ụba na ellagic acid ma ọ bụ mgbakwunye ya na urolithins dị ka isi ihe ha. Urolithin, otu mgbe na plasma, enwere ike ịchọpụta ya n'ụdị glucuronides.
Urolithins na -adịkarị n'ọtụtụ nri, n'agbanyeghị na ọ bụghị mkpụrụ ndụ urolithins niile nwere ike nweta nri. Ozugbo etinyere nri bara ụba na acid ellagic, ọ dabere na ahịhịa ahịhịa iji mebie ellagitannins na punicalagin banye n'ime metabolites dị n'etiti na ngwaahịa ikpeazụ; ụmụ irighiri urolithin.
Ụmụ irighiri ihe ndị a nwetara ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya ma na-aga n'ihu na-ebili dị ka mgbakwunye nri n'ihi nri mgbochi, mgbochi ịka nká, mgbochi mkpali, na uru na-akpalite autophagy. Ọzọkwa, a na -ejikọ mkpụrụ ndụ urolithin akọwapụtara na ọkwa ike ka mma ka ha na -enwe nnukwu mmetụta na ahụike mitochondrial. Mmepụta ume n'ime ahụ bụ usoro na -eme na mitochondria, na imeziwanye ọrụ nke akụkụ ahụ a bụ otu n'ime ọtụtụ ọrụ nke Urolithins.
Molecules mara nke Urolithin
Urolithins na -ezo aka na ụmụ irighiri ihe dị iche iche nke ezinụlọ urolithin mana ha nwere usoro kemịkal dị iche iche, aha IUPAC, usoro kemịkalụ na isi mmalite. Ọzọkwa, ụmụ irighiri ihe ndị a nwere ọtụtụ uru na uru dị iche iche na ahụ mmadụ, yabụ a na -akpọsa ya n'ụzọ dị iche n'ụdị mpempe akwụkwọ.
Urolithins, mgbe nyochachara nke ọma, amaara na ọ ga -adaba na molecule ndị na -esote n'ime ahụ, n'agbanyeghị na amachaghị banyere molekul ọ bụla:
Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
Urolithin A bụ glucuronide
Rol Urolithin B (3-Hydroxy Urolithin)
Urolithin B bụ glucuronide
Rol Urolithin D (3,4,8,9-Tetrahydroxy Urolithin)
Urolithin A na Urolithin B, nke a na-akpọkarị UroA na UroB n'otu n'otu, bụ metabolites Urolithins ama ama na ahụ. Abụọ ndị a bụkwa ụmụ irighiri ihe ndị a na -eji ugbu a na mgbakwunye na ntụ ntụ dochie nri.
N'otu oge n'ọbara, Urolithin A dị ka Urolithin A glucuronide, enwere ike chọpụta Urolithin B ka Urolithin B glucuronide. N'ihi nke a, ekwenyere na ha nwere otu mmetụta ahụ dị ka ndị butere ụzọ dị ka ọmụmụ vivo na urolithins enwebeghị ike. Enweghị ọmụmụ vivo na -eme ka o sie ike ịtụle ma UroA na UroB glucuronides nwere mmetụta ọ bụla dị iche na UroA na UroB n'onwe ha.
Urolithin A nwere ihe mgbapụta ọzọ enwere ike ịchọpụta n'ọbara, ya bụ, Urolithin A sulfate. Ihe nrụpụta ndị a niile na -arụ ọrụ ha n'ọbara wee wepụta ya na sistemụ site na mmamịrị.
Urolithin D bụ molekul ọzọ dị mkpa nke nsonaazụ microbiota eriri afọ na -emepụta, agbanyeghị, amachaghị nke ọma na nsonaazụ ya na ojiji ọ nwere. Ugbu a, anaghị eji ya na mgbakwunye ma ọ bụ nnọchi nri, n'adịghị ka ndị ogbo ya, UroA na UroB. Ọzọkwa, amabeghị isi nri Urolithin D.
Urolithin A ngwugwu Ozi ntụ ntụ
Urolithin A anaghị adịkarị site na isi nri wee bụrụ otu nke ngwakọta akpọrọ benzo-coumarins ma ọ bụ dibenzo-α-pyrones. Ọ bụ metabolized n'ezie site na ellagitannins ruo Urolithin A 8-Methyl Ether tupu etinyere ya ọzọ n'ime Urolithin A. Ngwaahịa ikpeazụ a dị n'ọtụtụ na ụlọ ọrụ mmepụta anyị n'ụdị Urolithin A ntụ ntụ. MethylUrolithin A ntụ ntụ dịkwa maka ịzụta na nnukwu ma ọ bụrụ na achọrọ.
Urolithin A adịghị na otu ọkwa, ọbụlagodi otu ọkwa oriri nke ndị bu ya ụzọ, n'ime ndị dị iche iche n'ihi na ọ dabere na ọrụ nke microbiota gut. Ekwenyere na metabolism nke Urolithin A chọrọ Gordonibacter urolithinfaciens na Gordonibacter pamelaeae mana ụfọdụ ndị nwere nke a ka na -egosi ntakịrị na enweghị mmetụta na mmepụta nke molekul ahụ.
Urolithin A nwere atụmatụ akọwapụtara nke na -eme ka ọ pụọ iche na ihe ndị ọzọ, dị ka ndị a kpọtụrụ aha na tebụl dị n'okpuru.
3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-one
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-otu; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) PYRAN-6-ONE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-otu; Castoreum pigmenti I; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-otu, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-otu); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-otu
> 300 Celsius
Ìhè Yellow ntụ ntụ
Nsogbu na DMSO (3 mg / mL).
Ụbọchị ruo izu: N'ime ụlọ gbara ọchịchịrị, nke kpọrọ nkụ na 0 -4 degrees C Ọnwa ruo Afọ: N'ime friza, pụọ na ihe ọ atụ atụ na -20 degrees C.
A na -eji nri eme ihe dị ka nnọchi nri na mgbakwunye
Ihe ngwugwu Ozi Urolithin B
Urolithin B bụ ogige phenolic nke ka malitere imepụta oke site na Jenụwarị nke 2021. Enwere ike nweta ya site na iri ọtụtụ nri bụ isi mmalite nke ellagitannins nke nwere ike metabolized n'ime Urolithin B. Achọpụtala na ọ nwere ike. ogige mgbochi ị nwere ike ịzụta na nnukwu n'ụdị urolithin B ntụ ntụ.
Njirimara dị iche iche nke urolithin B ntụ ntụ dị na ụlọ ọrụ nrụpụta anyị ka akpọtụrụ n'okpuru:
3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, d] pyran-6-otu
AURORA 226; Urolithin B; AKOS BBS-00008028; 3-hydroxy urolithin; 3-hydroxy-6-benzo [c] chromenone; 3-hydroxybenzo [c] chromen-6-otu; 3-Hydroxy-benzo [c] chromen-6-otu; 3-HYDROXY-6H-DIBENZO [B, D] PYRAN-6-ONE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-one, 3-hydroxy-; 3-Hydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-one AldrichCPR
> 247 Celsius
Light aja aja ntụ
Soluble na 5mg/mL mgbe ọkụ, mmiri doro anya
Anti-oxidant na Pro-oxidant emeju na ọrụ estrogenic.
Ewezuga isi ihe ndị a nke Urolithins nke etolitere site na omume gut flora, enwere ọtụtụ ụmụ irighiri ihe bụ ndị na -eme etiti na -etolite n'oge ndakpọ nke ndị bu ụzọ. Ndị etiti a gụnyere:
Rol Urolithin C (3,8,9-Trihydroxy urolithin)
Amabeghị ihe dị ukwuu gbasara ndị na -eme ihe n'etiti ugbu a, agbanyeghị, nyocha ọzọ nwere ike ịchọpụta uru na ojiji nke ụmụ irighiri ihe Urolithin ndị a.
Kedu ka Urolithins si arụ ọrụ?
Urolithins, dị ka ogige ndị ọzọ ejiri na mgbakwunye, na -emetụta akụkụ na sistemụ dị iche iche na ahụ, iji mepụta nsonaazụ ha bara uru. Enwere ike kewaa usoro ọrụ nke Urolithins, ma A na B, ka ọ bụrụ ngalaba isi isii, ngalaba nke ọ bụla nwere ikike imepụta ọtụtụ uru.
Isi uru nke inwe akụrụngwa antioxidant na -ebelata nrụgide oxidative n'ime ahụ. Nchegbu oxidative na -ezo aka na nchekasị na sel na anụ ahụ n'ime ahụ n'ihi mmeghachi omume kemịkalụ na -emepụta ogige na -akwụghị chịm, nke a makwaara dị ka radicals n'efu. Radicals ndị a nwere ikike nwere ike isonye na mmeghachi omume kemịkal na -agbanwe agbanwe n'ime ahụ, ihe ndị na -emepụta ya na -emebi sel na anụ ahụ.
Urolithins na -egbochi nrụgide oxidative a, nke na -ebute mgbochi nke mmerụ ahụ selụ ma na -abawanye ohere ịlanarị mkpụrụ ndụ. A na -eme mmetụta ndị a site na mbenata mmepụta nke ụdị mkpụrụ ndụ ikuku oxygen na -arụ ọrụ (iROS), nke bụ ụdị radicals n'efu. Ọzọkwa, njirimara antioxidant nke Urolithin A na Urolithin B na -ebilitekwa site na mbelata okwu NADPH oxidase subunit, nke dị oke mkpa maka mmeghachi kemịkalụ na -ebute nrụgide oxidative.
Iji mepụta akụrụngwa antioxidant, Urolithins na-abawanye ngosipụta nke antioxidant heme oxygenase-1 site na ụzọ akara Nrf2/ARE. Nke a na -enyere ha aka ọ bụghị naanị belata ogige ndị na -emerụ ahụ kamakwa mụbaa ezigbo enzymes nke na -akwalite akụrụngwa antioxidant.
Urolithins, mgbe enyere ụmụ oke nwere mmebi ụbụrụ LPS, gbochiri microglial ịgbalite, ma ọ bụ n'ụzọ dị mfe, akpụ na mbufụt nke ga-abawanye ohere nke mmebi ụbụrụ na-adịgide adịgide. Ekwenyere na mmetụta nke urolithins bụ ngwakọta nke ihe antioxidant na ihe mgbochi mkpali.
● Ihe mgbochi mkpali
Njirimara mgbochi mkpali nke Urolithins bụ otu n'ime isi ihe kpatara ito eto ya na ụwa mmeju. Usoro nke ogige ndị a, ọkachasị Urolithin A, Urolithin B, na ụdị glucuronides ha, dị nnọọ iche ma na -arụpụta nsonaazụ dị iche iche.
Mmetụta mgbochi mkpali nke Urolithin A na Urolithin B nwere otu usoro dị ka ọgwụ mgbochi mkpali na-abụghị Steroid ma ọ bụ NSAID dị ka Ibuprofen na Aspirin. A maara Urolithins nwere mmetụta mgbochi na mmepụta PGE2 na ngosipụta nke COX-2. Ebe NSAID na-egbochi ngosipụta nke COX 1 na COX 2, enwere ike kwubie na Urolithins nwere mmetụta mgbochi mkpali karịa.
Egosipụta ihe mgbochi mkpali nke Urolithins abụghị naanị ịlụ ọgụ mbufụt na ahụ mana ha nwekwara ike weghachite mmebi ahụ mebiri akụkụ ahụ n'ihi nfụkasị ogologo oge nke butere ọdịda akụkụ ahụ. N'ime nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya n'ụdị anụmanụ, achọpụtara na oriri urolithin nwere ikike ibelata nephrotoxicity nke ọgwụ kpatara site na igbochi ọnwụ mkpụrụ ndụ akwara na mbufụt.
Achọpụtara na urolithin A ntụ ntụ, nke enyere ọnụ, nwere mmetụta mgbochi na ụzọ mbufụt yana proapoptotic cascade, yabụ, na -echebe ọrụ akụrụ. Njirimara ndị a nke Urolithin A yana urolithins ndị ọzọ na -ekwu maka ọdịnihu ebe enwere ike iji ogige ndị a na ọgwụ yana iji ha eme ihe ugbu a dị ka mgbakwunye.
Ties Njirimara mgbochi ọrịa cancer
Ekwenyere na urolithins bụ ihe mgbochi carcinogenic n'ihi ike ha nwere mmetụta dị ka njide okirikiri sel, mgbochi aromatase, ntinye apoptosis, iwepu akpụ, nkwalite autophagy, na ịka nká, ụkpụrụ transcriptional nke oncogenes, na ndị na-anabata ihe na-eto eto. Mmetụta ndị a, ma ọ bụrụ na ha anọghị, nwere ike bute uto na -adịghị ahụkebe nke mkpụrụ ndụ kansa. Egosipụta atụmatụ mgbochi nke Urolithins, ọkachasị maka ọrịa kansa prostate na ọrịa kansa eriri afọ, ebe ọtụtụ ndị nyocha na -agbakọta maka iji Urolithins dị ka ọgwụ mgbochi maka ọrịa kansa prostate.
Ọmụmụ ihe emere na 2018 mụrụ nsonaazụ Urolithin na ụzọ mTOR na ebumnuche nke ịchọta nhọrọ ọgwụgwọ maka ọrịa kansa pancreatic. A na -ejikọ ọrịa kansa pancreatic na ọnụọgụ ọnwụ dị elu, mana nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya na -egosi na Urolithin nwere ike ọ bụghị naanị ịbawanye ọnụego nlanarị kamakwa ọ na -egbochi grafting nke mkpụrụ ndụ akpụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, na -ebute metastasis. A mụrụ Urolithin A nke ọma yana atụnyere nsonaazụ ya na nsonaazụ nke usoro ọgwụgwọ ọkọlọtọ mepụtara. E kwubiri na Urolithin A rụpụtara nsonaazụ ka mma mgbe ejiri jikwaa ọrịa kansa pancreatic, n'ọnọdụ abụọ ahụ; mgbe ejiri ya naanị ma ọ bụ jiri atụmatụ ọgwụgwọ ọkọlọtọ.
Site na nyocha ọzọ, uru Urothilins nwere ike mechaa gwọọ ọrịa kansa pancreatic.
A maara Urolithins maka ihe nje antibacterial ha nwere mmetụta a site na igbochi ụzọ nkwukọrịta nke ụmụ irighiri ihe, na -enyeghị ha ohere ịgagharị ma ọ bụ bute mkpụrụ ndụ. A na -ekwenyekwa na ha nwere ihe na -egbochi ọrịa, ọ bụ ezie na usoro a kabeghị.
Enwere ọrịa abụọ nke Urolithins nwere mmetụta mgbochi mgbochi siri ike na ya, na -ebute nchekwa maka ahụ mmadụ. Ọrịa ndị a bụ ụmụ nje ịba na Yersinia enterocolitica, ha abụọ na -ebute nnukwu ọrịa na mmadụ. Usoro nke Urolithins nwere ihe nje antibacterial n'agbanyeghị agbanyeghị ihe dị ndụ.
Njirimara Anti Estrogenic na Estrogenic
Estrogen bụ homonụ dị mkpa na ahụ nwanyị, yana mbelata ọkwa ya na -ejikọ ya na mgbaama dị ka ịgba mmiri, ọkụ na -enwu enwu, yana mbelata ọkpụkpụ. N'iburu mkpa nke homonụ ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na -enyocha ihe nnọchi anya. Agbanyeghị, homonụ exogenous nwere mmetụta ụfọdụ na -eme ka ojiji ha ghara ịdị mma.
Agbanyeghị, Urolithin A na Urolithin B nwere otu ụdị dị ka estrogen endogenous yana njikọta maka ndị na -anabata estrogen n'ime ahụ. Urolithin A nwere mmekọrịta siri ike, ọkachasị maka onye na -anabata alfa ma e jiri ya tụnyere ihe nnabata beta. Ọ bụ ezie na ogige abụọ a nwere myirịta na estrogen, urolithins nwere ma estrogenic na anti-estrogenic, n'adịghị ka estrogen endogenous.
Duality nke mmetụta a nke Urolithins na -eme ka ha bụrụ nhọrọ ọgwụgwọ nwere ike maka ụfọdụ nsogbu na -ebilite mgbe enyere estrogen ka ọ gwọọ ihe mgbaàmà nke erughị estrogen.
Ihe mgbochi mmechi protein
Glycation protein bụ usoro ejikọtara molekul na protein. A na -ahụ usoro a n'oge ịka nká ma ọ bụ dịka akụkụ nke nsogbu ụfọdụ. Urolithins na-egbochi mgbakwunye shuga, yabụ na-ebute mmetụta mgbochi glycation. Ọzọkwa, ha na -egbochi mmepụta mkpụrụ ndụ glycation dị elu, mkpokọta nke bụ nzọụkwụ pathophysiological dị mkpa na mmepe nke ọrịa shuga.
Uru nke urolithins
Urolithins nwere usoro ihe dị iche iche iji mepụta uru nchekwa dị iche iche na ahụ mmadụ. Urolithin A ntụ ntụ na urolithin B ntụ ntụ na -enyere aka imepụta ihe mgbakwunye ndị ama ama n'ihi uru nke ihe ndị bụ isi. A na -akwado uru niile nke ogige kemịkalụ ndị a site na ihe akaebe sayensị, yana a na -eme nyocha ọzọ iji kwado mgbakwunye nke Urolithins na ntuziaka maka ịgwọ ọtụtụ nsogbu.
Uru nke ogige ndị a, dabere na usoro ndị a kpọtụrụ aha n'elu, gụnyere:
A na-amịpụta urolithins n'ọtụtụ nri ellagitannins nke amaara na ha bara ọgaranya na antioxidants. Ebe nri na -abụkarị ellagitannins na ellagic acid bụ mkpụrụ pọmigranet, ha bụkwa nnukwu ihe na -akpata antioxidants. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmata ma njirimara antioxidant nke isi nri na urolithins yiri ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ nwere ikike dị elu karịa nke ọzọ.
Nnyocha izizi nke Urolithin A na Urolithin B gosipụtara na mmetụta antioxidant nke ndị a bụ ugboro 42 erughị mkpụrụ osisi n'onwe ya, yabụ na -egosi na ogige kemịkalụ ndị a agaghị eme maka ezigbo ihe maka mgbakwunye.
Agbanyeghị, nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya na usoro nyocha dị iche na -egosi na Urolithin A na B na -arụ ọrụ nke ọma ma nwee akụrụngwa antioxidant nwere ike ịlụso mmetụta nke nrụgide oxidative ọgụ. Mgbe ejiri otu usoro nyocha ahụ mụọ urolithins niile iji chọpụta nke kacha nwee ike, Urolithin A pụtara ihe. Emegharịrị nsonaazụ ahụ n'ọmụmụ ihe yiri ya na Urolithin A na -ebute ụzọ n'ike, ọzọ.
N'ezie, otu n'ime ọmụmụ ihe lekwasịrị anya n'ịtụle njirimara antioxidant nke ogige kemịkalụ ndị a site na inwale ike ha nwere ịlụ ọgụ nrụgide oxidative. Maka ebumnuche ọmụmụ a, ndị nyocha butere nchekasị na sel neuronal na mgbe ekpughere ya Urolithins, ọkachasị Urolithin B, ha chọpụtara mbelata nke nrụgide yana nlanarị nke sel neuronal.
Njirimara mgbochi mkpali nke Urolithins na-emepụta ọtụtụ uru, nke egosiri na sayensị niile.
Ihe eji eme ụlọ maka ọgwụgwọ ịba nke a na -ejikarị ebe ụfọdụ n'ime ime obodo gụnyere iji pọmigranet. Ndị ọrụ nyocha nwara ịghọta mmetụta dị mma nke ọgwụgwọ a na ọgwụgwọ ịba site na ijikọ nsonaazụ ya na nsonaazụ Urolithins metabolized na eriri afọ site na pọmigranet.
Emere ọmụmụ iji mụọ nsonaazụ Urolithins n'ịgwọ ịba na -ekpughere mkpụrụ ndụ monocytic nwere ọrịa na Urolithins. Ọmụmụ ihe a chọpụtara na ogige kemịkalụ na-egbochi mwepụta nke MMP-9, nke bụ metalloproteinase dị mkpa na mmepe na ịrịa ọrịa ịba. Mgbochi nke ogige ahụ na -egbochi ịba ịba ọrịa n'ime ahụ, yabụ kpatara ekwenyere na ọ nwere mmetụta ịrịa ọrịa.
Nsonaazụ ọmụmụ ahụ gosikwara na Urolithins gbochiri ngosipụta mRNA nke ọrịa ịba, na -ebute mmachi ọzọ nke ikike microorganisms nwere ike ibute ọrịa. Nsonaazụ ọmụmụ a na -egosi na nsonaazụ bara uru nke ọgwụgwọ ụlọ gụnyere pomegranate bụ n'ihi mmetụta urolithin.
2.Efufe na sel Endothelial
Atherosclerosis bụ ọnọdụ a na -ahụkarị nke na -eduga na mkparị obi na infarction myocardial. Ihe abụọ na -ebute mmepe nke atherosclerosis bụ nkwarụ endothelial na mbufụt. Nnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya nwara igosi na ihe mgbochi mkpali nke Urolithin nwere ike nwee ike igbochi arụ ọrụ endothelial, yabụ, jikwaa nhazi atherosclerosis na mmepe.
Ndị ọrụ nyocha chọpụtara Urolithin A nwere ihe mgbochi mkpali kachasị n'etiti urolithins niile. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya lekwasịrị anya na mkpụrụ ndụ endothelial mmadụ nke etinyere na LDL oxidized, ihe dị mkpa maka nhazi atherosclerosis, na mkpokọta dị iche iche nke Urolithin A. Ndị nyocha ahụ chọpụtara na Urolithin A gbochiri nitric oxide synthase ma belata okwu nke I-CAM, nke butere belata mbufụt na ibelata ikike nke mkpụrụ ndụ, ọkachasị monocytes ịgbaso mkpụrụ ndụ endothelial, n'otu n'otu. Mbelata nraranye monocytic na -ebelata nkwarụ endothelial.
Ọzọkwa, achọpụtara Urolithin A iji belata ngosipụta nke akwara necrosis factor α, interleukin 6, na endothelin 1; cytokines pro-inflammatory ọ bụla.
3.Emetụta na Fibroblasts na Colon
Colon na -ekpughere ọrịa na -efe efe na ihe ndị na -eri nri na -eme ka ọ dị mfe ibute ọnya, nke nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu ahụike. Ebe ọ bụ na eriri afọ na -emepụta Urolithin A na Urolithin B, ọ dị mkpa ịmata mmetụta ha na mbụ n'ime ahụ ha hiwere.
Iji mụọ nsonaazụ Urolithins na sel colon na fibroblasts, ndị ọrụ nyocha mere nnwale ebe ekpughere fibrobla na cytokines pro-inflammatory yana Urolithins. Dịka m kwuru n'elu, achọpụtara na Urolithins na -egbochi mmachi monocyte na mbugharị fibroblast iji gbochie mbufụt na eriri afọ.
Ọzọkwa, achọpụtara na Urolithins gbochiri ịgbalite ihe NF-κB, nke dị mkpa maka nhazi mbufụt. N'ezie, ndị ọrụ nyocha kwenyere na nke a bụ isi ihe na-akpata ihe mgbochi mkpali nke urolithins.
A na-ejikọ Urolithins na ihe mgbochi ọrịa kansa, na akpọrọ usoro nke ihe ndị a n'elu. Agbanyeghị, ekwuru uru nke ihe ndị a n'okpuru:
1. Nchekwa site na ọrịa kansa prostate
A na -achọpụtakarị urolithins n'ime ahụ ma ọ bụ na -eji ọbara ma ọ bụ mmamịrị; agbanyeghị, enwere ike ịhụ ha na eriri afọ nke nwoke na nwanyị yana gland prostate nke ụmụ nwoke.
N'ihi nchoputa a, ndị nyocha nwara inyocha ma ọ bụrụ na a na -ahụ uru nke ogige kemịkalụ na gland prostate dịka ọ dị na eriri afọ. N'ihi ya, e mere ọmụmụ, nsonaazụ ya gosipụtara na Urolithins nwere mmetụta nchebe na gland prostate.
Achọpụtara na Urolithin A na Urolithin B, yana Urolithin C na Urolithin D gbochiri enzyme CYP1B1 na gland prostate. Enzyme a bụ ebumnuche chemotherapy na Urolithin A gbochiri ya nke ukwuu, ma e jiri ya tụnyere urolithins ndị ọzọ. Ha gbochiri CYP1A1, agbanyeghị, achọrọ oke urolithins ka ewepụta mmetụta ahụ.
Emere ọmụmụ ọzọ iji mụọ nsonaazụ nchedo prostate nke Urolithins. Achọpụtara na Urolithin A nwere mmetụta mgbochi kansa na ọrịa kansa prostate site na ha abụọ, p53 dabere na p53 n'ụzọ onwe ha.
2. Topoisomerase 2 na CK 2 mgbochi
Urolithins nwere ihe na-egbochi ọrịa kansa site na igbochi ọtụtụ ụzọ molekul nke na-ebute ma ọ bụ na-ebute ụzọ na-egbochi uto kansa. Enzyme CK2 bụ enzyme dị mkpa nke na -esonye na ụzọ molekụla dị otú ahụ, yana isi ọrụ ya bụ ịkwalite mbufụt na ọrịa kansa.
Urolithins na-egbochi ụzọ dị iche iche iji ruo enzyme zuru ebe niile, CK2 iji mebie mmetụta ya, dị ka ihe na-akwalite ọrịa kansa. Egosipụtala Urolithin A ka ọ bụrụ onye na -egbochi CK2 dị ike, na silico.
N'otu aka ahụ, ekwenyere na mgbochi Topoisomerase 2 nwere mmetụta mgbochi kansa. N'ezie, usoro a na -eji ụfọdụ ndị na -ahụ maka kemoterapi dị ka Doxorubicin. N'ime nyocha emere n'oge na -adịbeghị anya, achọpụtara na Urolithin A nwere ike karịa Doxorubicin na igbochi Topoisomerase 2, yabụ, na -akpọ maka mgbakwunye ya na ntuziaka ugbu a maka ịgwọ ọrịa kansa ụfọdụ.
Njirimara antibacterial nke Urolithins na -adabere na mgbochi mgbochi mmetụta nke na -anapụ ikike nke microorganism ikwurita okwu, imegharị, na imepụta ihe na -ebute ọrịa. Ọ bụ usoro dị mkpa maka ịlanarị nje bacteria, na mgbochi ya site na Urolithins na -egbu microorganism.
Isi akụrụngwa antibacterial nke Urolithin bụ ikike ya ichebe eriri afọ site na oke nke Yersinia enterocolitica. N'ezie, a na -ejikọ Urolithins na ngbanwe nke ahịhịa ahịhịa, otu osisi nke na -ahụ maka mmepụta ha na mbụ. Nke a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ naanị ihe ndị dị ndụ na ahịhịa nwere ike ịbawanye mmepụta Urolithins.
Urolithins na-ejikọ ndị na-anabata Estrogen ma mepụta ma, estrogenic na anti-estrogenic properties. Nke a na -eme ka ọ bụrụ nnukwu onye ntuli aka maka Modulators Estrogen Receptor Modulators ma ọ bụ SERM, nke bụ isi usoro ya bụ inwe mmetụta dị mma n'otu akụkụ ahụ yana mmetụta mgbochi n'akụkụ ọzọ nke ahụ.
N'ime otu ọmụmụ emere na nsonaazụ urolithins na ndị na-anabata estrogen, achọpụtara na ha, ọkachasị urolithin A, na-egbochi ngosipụta mkpụrụ ndụ nke mkpụrụ ndụ cancer cancer endometrial ER-nke ọma, na-ebute mkpochapụ ọrịa cancer endometrial. Hypertrophy endometrial bụ mmetụta na -ahụkarị nke estrogen dị na post neoplasia dị ka ụmụ nwanyị na -ewere ọgwụgwọ nnọchi homonụ, na ekwenyere na iji urolithins nwere mmetụta nchebe na endometrium. Agbanyeghị, ekwesịrị ime nyocha ọzọ tupu Urolithins nwere ike bụrụ ọgwụ SERM na -esote.
Ọnụnọ ngwaahịa ngwụcha glycation dị elu bụ akara nke hyperglycemia nke na-ebute ndị mmadụ mmerụ ahụ metụtara ọrịa shuga ma ọ bụ ọbụna ọrịa Alzheimer. Egosipụta Urolithin A na Urolithin B nwere mmetụta mgbochi glycation nke na-egbochi mkparị obi ma na-ebelata ohere nke neurodegeneration nke ukwuu.
Yabụ, mgbochi nke glycation protein site na Urolithins kwenyere na ọ nwere mmetụta cardioprotective na neuroprotective.
Edepụtara uru nke Urolithin A kpọmkwem n'okpuru:
Mee ka ndụ gị dịkwuo ogologo
Ịka nká, nchekasị, na nsogbu ụfọdụ nwere ike imebi mitochondria, nke dị oke mkpa maka imepụta ume nkịtị na iji ya na ahụ. Ọzọkwa, a na -akpọkarị mitochondria 'ụlọ ike nke sel', nke na -egosi mkpa ọ dị maka ịrụ ọrụ nke sel. N'ihi ya, mmebi ọ bụla nke ụlọ ọkụ a ga -emetụta sel na -adịghị mma ma belata ogologo ndụ ya.
Urolithins na -ebute mmetụta pụrụ iche akpọrọ mitophagy nke na -enye ahụ ohere iwepu mitochondria mebiri emebi, n'agbanyeghị ihe kpatara mmebi ahụ, ma bulie ogologo ndụ. Dabere na oke mmebi, mitochondria nwere ike megharịa ya maka nri na imepụta ume.
Nlekọta akwara na -adịghị mma
Dịka m kwuru n'elu, urolithins nwere ihe mgbochi mkpali na ọ bụ ihe ndị a na-akwalite nhazi sel neuronal na ụbụrụ, nke nwere mmetụta dị mma na cognition na njigide ebe nchekwa. Ọzọkwa, Urolithin A na -echebe megide neurodegeneration hụrụ na ọrịa Alzheimer, yabụ, nsonaazụ neuroprotective.
● Gbochie Ọrịa Prostate
Urolithin A nwere ihe mgbochi ọrịa kansa mana a na-ahụ ha nke ọma n'ihe gbasara ọrịa kansa prostate, yana ọtụtụ ọmụmụ na-akwalite iji mkpụrụ pọmigranet na ebe ndị ọzọ Urolithins maka ọgwụgwọ ọrịa kansa prostate.
Na -emeso oke ibu
Urolithin A nwere mmetụta mgbochi oke ibu n'ihi na ọ bụghị naanị na-egbochi nchịkọta abụba abụba n'ime ahụ kamakwa ọ na-egbochi ihe nrịba ama maka adipogenesis. N'ime ọmụmụ emere n'ụdị anụmanụ, achọpụtara na Urolithin A nwere mmetụta na -ebuli elu na T3 homonụ thyroid, nke na -ebute ịbawanye ume ike na oke. Nke a na -ebute thermogenesis ma na -eme ka abụba na -acha nchara nchara gbazee, ebe abụba na -acha ọcha na -abanye n'ime agba aja aja.
N'otu nnyocha ahụ, achọpụtara na URolithin A nwere mmetụta mgbochi oke ibu ọbụlagodi ụmụ oke e nyere nri nwere oke abụba. Nke a na -egosi nkwa dị ukwuu gbasara oke ibu na ndị nyocha ahụ kpọrọ oku ka ngwa ụmụ mmadụ nke nchọta ndị a nwee ike iji ogige a lụso ọrịa oke ibu ọgụ.
Uru nke Urolithin B dị n'okpuru:
Na -egbochi mfu akwara
Urolithin B na -ekerịta ụfọdụ uru nke Urolithin A mana ọ nwere otu uru, ọ bụ naanị ya. A maara Urolithin B iji gbochie mfu akwara na steeti physiological na pathological. Ọzọkwa, ọ na -akwalite uto akwara ọkpụkpụ site n'ịbawanye njikọ protein n'ime mọzụlụ.
Ọ na -enwekwa ihe mgbochi na atrophy akwara dị ka a hụrụ n'ọmụmụ ihe emere ụmụ oke nke bepụsịrị akwara akwara ha. Nke a gaara ebute atrophy anụ ahụ mana etinyere mice ya na obere nfuli osmotic nke na-enye ha Urolithin B. Achọpụtara na ụmụ oke ndị a na-emechi ụzọ ubiquitin-proteasome ha, nke butere enweghị atrophy anụ ahụ n'agbanyeghị akụkụ akwara sciatic. .
Usoro onunu ogwu nke urolithins
A na-enweta urolithins site na ogige eke yana a na-ahụta ka mgbakwunye ya nke ọma na enweghị onye nta akụkọ na-egbu egbu. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ogige ndị a ka na -eme nyocha ma nwee oke usoro nke ekwesịrị ịgbaso.
Mgbe nyochachara nke ọma banyere uru Urolithin A, enwere ọtụtụ nyocha nyocha emere iji chọpụta usoro onunu ogwu nke ọma. Emere nzere, mgbaze, metabolism na mwepụ ọmụmụ iji nyochaa njirimara nke ogige ahụ.
E kewara ọmụmụ ihe abụọ, dabere na ọnụ ọgụgụ ụbọchị, achọpụtara na ọmụmụ ụbọchị 28 nwere 0, 0.175, 1.75, na 5.0% nke Urolithin A agwakọtara na nri na ọmụmụ ụbọchị 90 na 0, 1.25, 2.5, na 5.0% Urolithin Ngwakọta agwakọtara na nri egosipụtaghị mgbanwe na usoro ọgwụgwọ, kemịka ọbara, ma ọ bụ hematology, ọ pụtaghịkwa usoro ọ bụla na -egbu egbu. Ọmụmụ ihe abụọ ahụ nwere ọgwụ kacha wee nwalee na 5% UA site na ịdị arọ na nri nke dugara na usoro ndị a; 3451 mg/kg BW/ụbọchị n'ime ụmụ nwoke yana 3826 mg/kg BW/ụbọchị n'ime ụmụ nwanyị n'ime ọmụmụ ụbọchị 90.
Yiri Urolithin A, a mụrụ Urolithin B nke ọma iji chọpụta usoro zuru oke. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iburu n'uche na ọmụmụ ndị ahụ lekwasịrị anya na usoro ọgwụgwọ dị mma iji nweta mmụba akwara kacha mma. Achọpụtara ọgwụ a ka ọ bụrụ 15uM, maka ma nwoke ma nwanyị, n'agbanyeghị oke ibu.
A na -ejikwa ogige a, ọkachasị n'ihi na ọ bụ etiti n'oge mmepụta Urolithin A. Agbanyeghị, emebeghị nyocha zuru oke maka usoro kwesịrị ekwesị ka ekpebie maka Urolithin a kapịrị ọnụ.
Isi nri nri nke urolithins
Achọpụtaghị Urolithins n'ozuzu ya na nri ọ bụla, agbanyeghị, a na -ahụ ha dị ka ellagitannins. Tannins ndị a na-adaba na acid ellagic, nke na-agbariwanye ọzọ n'ime Urolithin A 8-Methyl ether, wee banye Urolithin A, na n'ikpeazụ, Urolithin B. Ihe oriri bara ụba na Urolithins bụ:
Mkpụrụ osisi (mg/100g ịdị ọhụrụ)
Jam mkpụrụ osisi strawberry
raspberries odo odo
Ihe ọ Beụ (ụ (mg/L)
Ihe ọ juiceụ Pụ pọmigranet
Wine na-acha ọbara ọbara
Dị ka a hụrụ na tebụl, Cloudberries bụ mkpụrụ osisi nwere Ellagitannins kachasị elu na Ellagic acid, ebe pọmigranet dị ka nke abụọ. Otú ọ dị, ihe ọiceụụ pọmigranet bụ n'ezie isi iyi ka ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa nke ike ojii.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọdịnaya nke ellagic acid na akụrụngwa nri adịghị ka otu urolithin n'ime ahụ. Njikwa bioavailability nke URolithins dabere na eriri afọ gut nke onye ọ bụla.
Kedu ihe kpatara ị ga -eji zụta n'aka ụlọ ọrụ nrụpụta anyị?
Urolithin Powder A na Urolithin Powder B dị na nnukwu, na ụlọ ọrụ na -emepụta anyị nke na -ejikọ mmepụta, nyocha, mmepe na ire ụdị mgbakwunye a. A na -arụpụta ngwaahịa anyị site na iji oke nkenke ịgbaso ntuziaka nchekwa niile, nke na -ahụ maka ịdị elu na nchekwa nke ngwaahịa ikpeazụ. A na -enyocha ngwaahịa niile tupu imepụta ya, a na -enyocha ya nke ọma n'oge yana mgbe emechara ya iji mezuo ụkpụrụ ịdị mma gị.
Mgbe emepụtachara, a na -anwale ngwaahịa n'ụlọ nyocha anyị otu oge iji lelee maka ịdị mma, ike na nchekwa nke urolithin ntụ ntụ na ngwaahịa ndị ọzọ. Ozugbo akwadochara maka nkesa, a na-akwakọba ngwaahịa ma chekwaa ya na ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị, na ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ekwesị ka ị na-agbaso ntuziaka niile iji jide n'aka na ngwaahịa dị elu ruru gị. A naghị ekpughe ude urolithin n'anwụ anwụ n'oge njem, nkwakọ ngwaahịa, ma ọ bụ nchekwa n'ihi na nke ahụ nwere ike imebi ngwaahịa ikpeazụ.
Ịzụta Urolithin ntụ ntụ na urolithin B ntụ ntụ sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekwe nkwa ngwaahịa dị oke mma na ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Totiger TM, Srinivasan S, Jala VR, et al. Urolithin A, ihe mejupụtara eke sitere na akụkọ ihe mere eme iji zute PI3K/AKT/mTOR Pathway na Ọrịa Pancreatic. Ọrịa Cancer Ther. 2019; 18 (2): 301-311. ma ọ bụ: 10.1158/1535-7163.MCT-18-0464.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. Urolithin A na-ebelata Nephrotoxicity nke Cisplatin na-akpata site na igbochi mbufụt akụrụ na apoptosis na ụdị nnwale nnwale. J Pharmacol Exp Ther. 2017; 363 (1): 58-65. ma ọ bụ: 10.1124/jpet.117.242420.
Juan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, Francisco Tomás-Barberán, "Ihe Ọmụmụ nke Urolithins, Gut Microbial Ellagic Acid-Metabolite Metabolites: Ihe akaebe dị ugbu a", Ihe mgbakwunye dabere na mgbakwunye na ọgwụ ọzọ, vol. 2013, ID 270418, ibe 15, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/270418.
Lee G, Park JS, Lee EJ, Ahn JH, Kim HS. Usoro mgbochi mkpali na antioxidant nke urolithin B na microglia na-arụ ọrụ. Phytomedicine. 2019; 55: 50-57. ma ọ bụ: 10.1016/j.phymed.2018.06.032.
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A na-ebelata nrụrụ endothelial nke ox-LDL na-akpata site n'ịgbanwe microRNA-27 na ụzọ ERK/PPAR-.. Resolọ nri nri Mol. 2016; 60 (9): 1933-1943. ma ọ bụ: 10.1002/mnfr.201500827.